I-bungalow enembono entle yechibi - I-Airbnb
I-bungalow enembono entle yechibi
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguClarice & Jörn
I-bungalow epholileyo eyi-35m² enombono obalaseleyo wechibi, igadi encinci kunye nethafa eligqunyiweyo lixhotyiswe kakuhle kwaye libonelela ngendawo eyaneleyo yabantu abayi-2-4.
Inegumbi lokuhlala elinekhitshi elidibeneyo, amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Indawo yomlilo epholileyo ifudumeza i-bungalow ngamaplanga kunye nokufudumeza kwe-infrared kukwafudumeza igumbi lokulala. I-bungalow yonke ipholile kwaye ishushu nasebusika ngenxa yemithombo yobushushu emibini.
Indawo yokuhlala ibekwe ngqo echibini kwaye iyindalo enyulu. Ijikelezwe ngamahlathi ajikelezileyo, iidolophana ezincinci kunye neendawo zechibi. Ibhayi encinci inonxweme olunesanti kwaye iphambi komnyango. Kwidolophu ekufutshane kukho i-lido kunye neevenkile ezingenakubalwa.
Ibistro encinci ilungile elunxwemeni. Ngokubhekiselele kwi-gastronomy, yonke into inikezelwa eStorkow nakwiilali ezikufutshane, ukusuka ekulobeni kunye nakwiindawo ze-steakhouse ukuya kwi-upscale gastronomy kwidolophu ye-spa yase-Bad Saarow.
Ikhosi yegalufa ye-Bad Saarow enemingxuma eyi-3x18 yeyona nto intle kwaye icela umngeni eBerlin kwaye yimizuzu eli-10 kuphela ngemoto. Ukuqeshwa kwephenyane elwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Clarice & Jörn
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$260